अामाकाे सम्मान स्वरुप सबैले सेयर गरौ ! – Articles Nepal
अामाकाे सम्मान स्वरुप सबैले सेयर गरौ !
Articles Nepal November 4, 2018 0
दुनियाँमा रहेका सबै अामाकाे सम्मान स्वरुप सबैले सेयर गरौ !
हामीलाई याे सुन्दर संसार देखाउने, हामीलाई सुन्दर सपना देखाउने, हामीलाई ठुलो बनेकाे हेर्न चाहाने अामाहरु साच्चिकै महान छन । अाफुले एकछाक भाेकै रहेर पनि हाम्राे पेट भर्न त्यस अामा जस्तै शाश्वत जिउदाे भगवान कहाँ भेट्न सक्छौ र हामी ?
दुनियाँका हरेक अामाहरुले अाफ्ना सन्तानकाे खुसि मात्रै देखेका हुन्छन त्याे पनि निश्वार्थ भावनाकाे साथमा । हामीले जिन्दगीमा अामा जस्तै महान हुनसक्यौ भने अरु के नै चाहिन्छ र? हामी सबै अामा बन्न त सकंदैनौ तर अामा जस्तै निश्वार्थ दिलदार र सहनसिल हुनसक्यौ भने अवस्य सफल हुनेछौ ।
अामा कति पवित्र सव्द कति अमुल्य शब्द कति अाेजनदार शब्द । अामा तिमी महान छौ महान हौ र हरेक सन्तानलाई महान हुन सिकाउने छौ । तिमीबाट सिक्नेछन दुनयाका हरेक मान्छे महान बन्नलाइ । हाे अामा तिमी साच्चिकै महान छौ। अाफ्ना सन्तानकाे सट्टामा तिमी अाफै दुख्छौ । चाहान्छौ सन्तानलाई कहिल्यै चाेट नलागाेस लागि हाले पनि अाफलाई दुखाेस यस्ताे पवित्र साेच अामा बाहेक काे संग हुन्छ र?
हामीलाई सत्मार्गमा हिडाउन सिकाउने हाम्रा अामाहरु कहिल्यै दुखमा नपरुन कहिल्यै दुखि नहुन कहिल्यै पिडाकाे सागरमा नपौडिउन । हरेक सन्तानले अामाकाे दुख सम्झेर सेयर गरौ ! जय अामा ! जय जिन्दगी !
Previous Post: जानकारीकाे लागि सेयर गराैः कुखुराकाे मासु खाँदा जानसक्छ ज्यान
Next Post: मानवअधिकारकर्मी तुलाधरको निधन, सबैले भुले शान्ति प्रक्रियाका सहजकर्तालाई